Baraawe: Al-Shabaab oo Sarkaal iska Dishay
Axad, Bisha Shanaad 01, 2016 Wakhtiga Geeska Afrika 11:01
Wararka ka imanaya magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose, ayaa sheegaya in iska horimaad shalay galab ka dhacy halkaasi uu ku dhintay sarkaal darajo-dhexe oo ka tirsan Al-Shabab.
Iska horimaadkan ayaa la sheegay inuu dhacay kaidb markii cIidanka Amniyaadka ee sida weyn u taageera Amiirka Al-Shabab ay isku dayeen inay qabtaan xubno ka tirsan ururka oo taageersanayaa ninka Maraykanka ah ee Cumar Xamaami oo sidii kale loo yaqaan Abu Mansuur Al-Amrirki.
Warar aanu ka helnay ilo lagu kalsoon yahay ayaa VOA u sheegay in afar ka mid ah taageerayaasha Al-Amriki oo iskugu jirta Soomaali iyo Ajaanib lagu qabtay iska hormaadka.
Maxamed Faarax Al-Ansaari waxa uu horey uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabab, VOA ayuuna uga waramay sida u u jiraan wararka sheegaya in garabyo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dagaalameen magaalada Baraawe ee gobalka Shabeelada Hoose.
Dhageyso Dagaalka Al-Shabaab ee Baraawe